mhando 0.6.5 – Zvino inoratidza shoma netsikidzi
Gumiguru 26, 2010 kubudikidza chipo 8 Comments
netsikidzi - gotta kuvada
mhando 0.6.5 akaita nezvezvandaifanira squashing dzimwe netsikidzi (uye regressions shoma zvakare). Zviri nokure kupfuura yakatsiga uye yakanakisisa Software kuti tava vasunungurwa nhasi. Asiwo anowedzera kutsigira vamwe Header mashiripiti kutsvaka injini.
Anorega chete dzokororai kuchinja nerogi pano:
Fixed Slovenian mureza tsikidzi kushumwa kubudikidza anphicle (Yaiva Sierra Leon zvisati, ngaavongwe nokuti unopinza ziso!).
Wakaiswa nyaya chete nzira Wordpress nayo dzakafuridzirwa redirects uye URL rewritings sezvinotaurwa ne Marco, Wordpress haana kuziva nzira isu rakashandurwa Tag uye muboka prefixed maURL uye saka redirected navo default mutauro URL. dambudziko iri zvakare hwakavandudzika dzakafuridzirwa chimiro vamwe maURL.
Fixed kapukanana pamwe kushandura zvose uye pashure romukova shanduro izvo makadzivisa kugona kwavo kushanda – (kuvonga nightsurfer [tikiti #122]) – nesuwo akatora nguva kuvandudza nokurera kupfuura mashoko kuna kushandurira zvose kushandisa Meta panzvimbo Redirect.
Yakamisirwa json shanduro nokuda buddypress rukova nyaya – (kuvonga Inocima [tikiti #121]).
Tava kushanda iri zvakawanda mu trac edu hurongwa, rakavapa yakazaruka matikiti kuti kwawakabva itsva. Ndapota edza kuita izvi nesimba tariro nokusika matikiti matsva sekare kutsanya sezvaungagona.
Uye sezvo nguva dzose – vanonakidzwa shanduro iyi.
Ina Under: Release zviziviso Tagged With: buddypress, bugfix, mureza sprites, kuduku, rusununguko, SEO
mhando 0.6.1 – Buddypress deeper integration
Nyamavhuvhu 2, 2010 kubudikidza chipo 8 Comments
Fix rewrite urls and url translation issue when using custom structure (eg. when suffixed with .html) (ndatenda claudio)
Ina Under: Release zviziviso Tagged With: Bing (MSN) muturikiri, buddypress, kuduku, rusununguko, Wordpress plugin
mhando 0.5.5 – Buddypress Support
Chikumi 18, 2010 kubudikidza chipo 20 Comments
Ko iwe ruoko vuvuzelas ako asi nokuda Wordpress 3.0 rusununguko? Zvino unogona kuita kuti afarire chokwadi kuti azvino transposh plugin kuti Wordpress rinopa rutsigiro nokuda Wordpress itsva, uye sezvo bhonasi, rutsigiro buddypress. Izvi rutsigiro buddypress zvino zvinoreva kuti maURL vanowanika uye akapindura nayo iye zvino kuva translatable.
More kuchinja zvinosanganisira mamwe rutsigiro ezvinhu akaita kuti UI unworkable, kana somuenzaniso jQuery Ezvemutauro raishandiswa nedzimwe plugin kana dingindira, ikozvino – tinokwanisa kuti zvifambe.
Kufanana kare kubva mutsva chikuru shanduro Wordpress iri kubuda, tiri anodonha rutsigiro pamutemo kuti mukuru Wordpress 2.8 mhando, ari plugin vanofanira vachiri kushanda asi hazvina vaedzwa uye dzine zvigamba kuti shanduro kuchaita uye tinoratidza kuti iwe ndiwedzere.
sezvo nguva dzose – tinoda kunzwa kwauri kunze, chii chinoratidza uchida? uye izvo chikwata muchawana mukombe nyika? chete inodonha mhinduro dzako pano.
Ina Under: General Messages Tagged With: buddypress, kuduku, rusununguko, Wordpress 3.0, Wordpress plugin